नेप्सेको प्राविधिक विश्लेषण (आइतवार, २२ पुस २०७५)
बजार सारांश (पुस १९, २०७५)
गत साता नेप्से परिसूचक ३६ दशमलव २९ अंक (२.९९ प्रतिशत) घटेर ११७८ दशमलव ८७ मा बन्द भएको छ । अहिले नेप्से परिसुचक ५० दिनको मुभिङ एभरेज र २०० दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा तल चलिरहेको छ । गत साता नेप्से ५० दिनको मुभिङ एभरेजलाई ब्रेक गरेर तल गएको छ । पछिल्लो हप्ता दैनिक औसत कारोबार रकम रू. ७८ दशमलव ३६ करोड रहेकोमा गत साता कारोबार रकम घटेर रू. ३१ दशमलव ७७ करोड पुगेको छ । अहिले नेप्से परिसूचक एक्स्प्यान्डिङ एसेन्डिङ वेजभन्दा तल चलिरहेको छ । अहिलेको समयमा नेप्से परिसूचक ११०९ देखि १२३२ को स्विङको ३८ दशमलव २ प्रतिशत फिबोनाच्ची रिटे«समेन्ट भन्दा तल चलिरहेको छ । पछिल्लो साता बनेको सुटिङ स्टार प्रवृत्तिको मैनबत्तीले बजारमा बियरिश मोमेन्टम देखिएको छ ।
2019-01-06 - 117 view(s) - abhiyan